Feno fiovana ny fiainana. Miova hatrany ny zavatra rehetra. Ny fiovana ihany no zavatra tokana tsy mba miova. Ampahany amin'ny fisiantsika mihitsy tokoa mantsy izany. Na ny siansa aza dia mampianatra fa ampahany fototra amin'ny fiainana ny fiovana.
Matetika no mitranga tsy misy fampitandremana ny fiovana. Raha eo am-pamakivakiana ny fiainana andavanandro my isika, dia indro, tampotampoka eo, miova ao anatin'ny iray segondra ny zavatra rehetra. Tsy hitantsika akory aza indraindray ny fiavian'ilay fiovana.
Etsy an-danin'izany, mety hitantsika koa ny fiavian'ny fiovana. Noho ny famindrampon'Andriamanitra dia nomeny fampitandrema isika mba hampahafantarana antsika fa hiova tsy ho ela ny fandehan-javatra eo amin'ny fiainantsika. Rehefa mitranga izany, dia fahendrena kokoa ny manomboka miomana araka izay azo atao. Maro amin'ireo fiovana ireo no goavana: ny fanambadiana, ny fananan-janaka, ny fahanterana, ary na ny fahafatesana aza. Manama olona hafa maro eo amin'ny fiainana ny ankamaroany amintsika. Koa midika izany fa ny fiovana mitranga dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny ankohonantsika koa, ary amin'ny fomba goavana. Etsy an-kilarfizay, mety hisy fiantraikany eo amin'ny mpianakavy tsirairay koa ny fiovana eo amin'ny ankohonantsika.
Amin'ity herinandro ity isika dia hijery ny sasany amin'ireo fiovana goavana ireo. Tsy maintsy hiatrika izany ny ankamaroantsika, na ho ela na ho haingana. Hojerentsika koa ny fiantraikan'ireo fiovana ireo eo amin'ny fiainam-pianakaviantsika.
Vonona ho amin'ireo fiovana eo amin'ny fiainana ve ianao ?(1 Kor. 10:1-13)
Tsy manafina ny fahamarinana momba ny fiainana ny Baiboly. Aharihariny mazava mihitsy aza fa misy fotoana mety hahasarotra ny fiainana, ary mety hampalahelo sy ho feno fahoriana koa. Raha tena jerena, dia ireo ampahany mampalahelo amin'ny Baiboly no mameno ny ankamaroan'ny takilany. Ireo takila vitsivitsy voalohany sy ireo takila vitsivitsy any amin'ny farany ihany no maneho fotoana tsy misy fahoriana. Ny ankoatra izay dia manoritsoritra sary mampalahelo momba ny taranak'olombelona. Marina mihitsy ny filazan'i Paoly rehefa nanoratra izy hoe: "samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra." - Rôm. 3:23.
Vakio ny 1Kôr.10:1-13. Inona no fampitandremana hita eto, ary inona koa ireo teny fikasana omena antsika?
Amin'ny lafiny maro dia maneho ny safidy ataontsika manoloana ny fiovana ny fitondran-tenantsika. Miatrika fiovana tsy ankiato isika. Amin'ny maha-Kristianina antsika, ny fihaikana eo anoloana dia ny miatrika amim-pinoana ireo fiovana eo amin'ny fiainana, izany hoe matoky an'Andriamanitra ary maneho izany finoana izany amin'ny alalan'ny fankatoavana Azy. Ary tsy maintsy asehontsika izany fatokiana izany na dia tsy mora aza ny manao izany.
"Ny tena ilain'izao tontolo izao dia olona izay tsy azo vidim-bola na amidy, olona izay marina sy mahitsy hatrany amin'ny fanahiny lalina indrindra any; olona izay tsy matahotra ny hiantso ny fahotana amin'ny tena anarany; olona izay manana feon'ny fieritreretana mahatoky manoloana ny adidiny, tahaka ny fahatokian'ny fanjaitra amin'ny tondroavaratra; olona izay hijoro ho an'ny fahamarinana na dia hikoro aza ny lanitra." - Ed., t. 57.
Inona no fahadisoana nataon'ireo olona ao amin'ireto andininy eto ambany ireto manoloana ny fiovana? Inona no azontsika ianarana avy amin'ny fahadisoany?
Asa.5:1-10 ................................................................................................................................................................................ Gen.16:1-6 ............................................................................................................................................................................... Mat.20:20-22 ..........................................................................................................................................................................
Tonga ny fiovana, ary matetika izy ireny no mitondra fakam-panahy, fihaikana, ary tahotra koa aza indraindray. Mety hitarika antsika hanao zavatra tsy tsara izany. Koa ilaintsika ny mivonona ka hitafy ny fiadiana ara-panahy rehetra mba hiatrehana azy ireny amin'ny fomba sahaza (Efes. 6:11). Amin'izay dia afaka hanohitra ireo teti-dratsy sy ireo drafitr'i Satana isika.
Vonona ho amin'ny fahanterana ve ianao? (Sal. 71)
"Fito-polo taona no andron'ny taonanay ary raha tahiny mateza aza, dia valo-polo taona, nefa fahasasarana sy zava-poana ny voninahiny, fa mihelina faingana izany, ka lasa manidina izahay." - Sal. 90:10. Mampahatsiahy antsika ireo teny nosoratan'i Mosesy ireo fa mandeha faingana ny fotoana. Raha mandeha ny taona, dia mahita sy mahatsapa fiovana ao amin'ny vatantsika isika. Mihafotsy na mihintsana ny volontsika; manomboka miadam-pandeha isika; ary mety hahatsapa fanaintainana sy aretina isan'andro koa isika. Raha manam-bady aman-janaka isika, dia mety manan-janaka koa ny zanatsika. Amin'izay dia afaka mifaly amin'ny zafikelintsika koa isika. Nanampo antsika hiomana ho amin'io ampahany farany eo amin'ny fiainana io ny fiainana izay nolalovantsika teo aloha.
Vakio ny Sal.71. Inona no ampianarin'io salamo io momba ny fiomanana ho amin'ny fahanterana? Inona koa no ampianariny momba ny fiainana an-kapobeny?
Salamo nosoratan'ny olona efa lehibe iray izay nandalo ireo fihaikana rehetra entin'ny fiainana ny Sal.71. Faly koa anefa izy satria nametraka ny fitokiany teo amin'Andriamanitra nandritra ny androm-piainany. Ny fomba tsara indrindra hirosoana amin'ny fahanterana dia ny mametraka ny fitokiantsika eo amin'Andriamanitra raha mbola tanora isika. Mizara lesona tena manan-danja izay nanampy azy hiomana ho amin'io vanim-potoana eo amin'ny fiainana io ny mpanoratra. Afaka manampy antsika koa ireo lesona ireo:
1.Manana fahalalana lalina an'Andriamanitra. Mianara ny matoky an'Andriamanitra dieny amin'ny fahatanoranao (Sal.71:17). Ataovy fiarovana mafy ho anao Izy (Sal.71:1,Sal.71:7). Raiso ho Mpamonjinao Izy (Sal. 71:2). Harambato sy batery fiarovana Andriamanitra (Sal.71:3), fanantenana sy toky (Sal. 71:5). Lazao amin'ny olona ireo asa lehibe sy mahagaga nataony ho anao (Sal.71:16,17,19). Matokia ny hery sy ny tanjak'Andriamanitra (Sal. 71:18). Amin'ny farany dia mihiaka ilay mpanoratra hoe: "Andriamanitra ô, iza no tahaka Anao?" - Sal. 71:19. Mivavaha isan'andro ary ianaro isan'andro ny Tenin'Andriamanitra. Diniho ny zavatra rehetra ataony ho anao. Amin'izay dia hihalalina ny fitiavanao Azy.
2. Mikolokoloa fahazarana tsara. Hanampy antsika higoka fiainana lava kokoa sy tsara kokoa ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana, ny fanatanjahan-tena, ny fisotroana rano betsaka, ary ny fahazoana tanamasoandro sy fialan-tsasatra ampy. Matokia an'Andriamanitra (Sal.71:3), midera Azy (Sal.71:6), ary manana fanantenana mandrakariva (Sal.71:14).
3. Manompoa an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. Tohizo hatrany ny fanompoana an'Andriamanitra na dia amin'ny fahanterana aza. Midera Azy mandrakariva (Sal.71:8) ary lazao amin'ny olona fa tsara Izy (Sal.71:15-18) !
Vonona ho amin'ny fahafatesana ve ianao? (1 Kôr. 15:24-26)
Samy manantena avokoa isika rehetra fa ho velona amin'ny fiavian'i Kristy fanindroany. Raha tsy izany anefa no hitranga, dia afaka ny hiandrandra ny fiovana goavana indrindra amin'ny fiovana rehetra isika: ny fahafatesana. Tsy misy zavatra hafa misy fiantraikany lehibe eo amin'ny ankohonana mihoatra noho ny fahafatesan'ny iray amin'ny mpianakavy.
Vakio ny 1Kôr. 15:24-26. Inona no ampianarin'ireo andininy ireo antsika momba ny fahafatesana?
Mazava loatra fa imbetsaka ny fahafatesana no tonga amin'ny fomba tsy ampoizina sy mahatsiravina. Koa Inona ary no azontsika atao mba hiomanana ho amin'ny fiavian'izany? Ilaintsika ny mahazo antoka fa mifandray mandrakariva amim-pinoana amin'ny Tompo isika. Ilaintsika koa ny mangataka Azy mba handrakotra antsika amin'ny fahamarinany isaky ny indray mandingana eo amin'ny fiainantsika (Rôm.3:22). Marihina anefa fa tsy afaka ny hiomana ho amin'ny fahafatesana izay tsy hitanao fiaviana ianao.
Etsy an-danin'izany, Inona no azonao atao raha toa ka fantatrao fa tsy manana afa-tsy volana vitsivitsy hahavelomana ianao? Mety tsy azontsika antoka tsara ny fotoana handavoan'ny fahafatesana antsika, saingy azo antoka fa mety fantatsika ihany rehefa manakaiky ny fiafaran'ny fiainantsika isika. Koa tena zava-dehibe ny hiomanantsika sy ny fianakaviantsika ho amin'io toe-javatra tsy azo ihodivirana io.
Vakio ny 1 Mpanj. 2:1-4 , izay mirakitra ny sasany amin'ireo teny farany nolazain'i Davida tamin'i Solomona zanany. Inona ny lesona ampianarin'izany teniny izany antsika momba ny fiomanana ho amin'ny fahafatesana? Inona no azontsika atao mba hanampiana ny fianakaviantsika mba hiomana koa?
Nasain'i Davida hankato an'Andriamanitra ny zanany lahy. Marina fa nanao hadisoana maro izy teo amin'ny fiainany (vakio 2 Sam.11) ary tsy nanaraka an'Andriamanitra mandrakariva. Nianarany tamin'izany tamin'ny fomba tena sarotra indrindra anefa fa tokony hatao ho loha laharana mandrakariva Andriamanitra. Koa angamba ireo fahotana sy fahadisoan'i Davida tamin'ny lasa ireo indrindra no nahatonga ny teniny tamin'i Solomana ho tena mahery vaika tokoa. Tsy isalasalana fa niezaka nampitandrina an-janany izy mba tsy hanao ny hadalana izay nahatonga alahelo betsaka teo amin'ny fiainany. Nandoa sarany tena lafo tokoa mantsy izy noho ny fahotany. Koa tsy isalasalana fa tiany handray lesona avy amin'ny fahadisoany i Sôlômôna zanany.
Rehefa mamaky ny tantaran'ny Isiraely fahiny tany an'efitra isika, dia Inona no hitantsika? Mahita fiovana maro nitranga teo amin'ny fiainany isika. Teo anatrehan'izany dia nanao hadisoana hatrany hatrany izy ireo, na dia teo aza ny fanehoan'Andriamanitra tamin'ny fomba tena mahatalanjona ny fitiavany sy ny heriny. Tsaroanao ve izay nitranga mialoha ny nidiran'ny Isiraely tao amin'ny Tany Nampanantenaina? Hiatrika fiovana goavana fray indray izy ireo, ka hoy i Mosesy tamin'ny olona:"Ny masonareo efa nahita izay nataon'i Jehovah noho ny tamin'i Bala-peora; fa ny olona rehetra izay nanaraka an'i Bala-peora dia naringani Jehovah Andriamanitrao tsy ho eo amino. Fa hianareo izay nifikitra tamin'i Jehovah Andriamanitrareo kosa dia samy velona avokoa izao anio izao. Indro, efa nampianariko didy sy fitsipika hianareo, araka izay nandidian'i Jehovah Andriamanitro ahy, mba harahinareo any amin'ny tany izay efa hidiranareo holovana. Koa tandremo ary ataovy izany, fa izany no ho fahendrenareo sy ho fanananareo saina eny imason`ny firenen-tsamy hafa; fa handre izany lalana rehetra izany izy ka hanao hoe: Olona hendry sy manan-tsaina tokoa io firenena io. Fa iza no firenena, na dia lehibe aza, no mba manana andriamanitra akaiky azy tahaka an'i Jehovah Andriamanitra aminizay rehetra iantsoantsika Azy? Ary iza no firenena, na dia lehibe aza, no mba manana didy sy fitsipika marina tahaka izao lalema rehetra izao, izay ataoko eo anatrehanareo anio? Kanefa kosa mitandrema hianao, ka tandremo tsara ny fana.hinao, fandrao hadinoinao ny zavatra izay efa hitan'ny masonao, ary andrao miala amin'ny fonao izany, amin'ny andro rehetra hiainanao, fa ampahafantaro ny zanakao sy ny zafinao izany" - Deo. 4:3-9. Tena zava-dehibe tokoa ny tsy hanadinoantsika ireo zavatra nataon'ny Tompo ho antsika. Ary Inona no fomba tsara indrindra hanaovana izany? Azontsika atao ny mampianatra ny momba an'Andriamanitra amin'ny olona sy mitantara amin'izy ireo ny zava-mahagaga ataon'Andriamanitra ho antsika. Jereo indray ny tenin'i Mosesy. Hitanao ye ny lanja omena ny fianakaviana ao anatin'izany rehetra izany? Asain'i Mosesy mampianatra ny momba ny lalan'Andriamanitra amin-janany ny Isiraely. Ary hitantsika koa fa zavatra tena manimba ny fiainam-pianakaviana ny fahotana tao Peora. "Ny heloka izay nitondra ny famaizan'Andriamanitra teo amin'ny Isiraely tao Peora dia ny fahotana mifandraika amin'ny haratsiam-pitondran-tena. Nataon'izy ireo tsinontsinona ny lalana masin'Andriamanitra. Tamim-pahasahiana lehibe no nisarihan'ny vehivavy tao Peora ny lehilahin'ny Isiraely ho amin'ny fahotana. Mampalahelo fa tsy izany no fotoana farany nanotan'ny vahoakan'Andriamanitra taminy tamin'io fomba io" - AH, t. 326.
1. Zarao arnin'ny kilasy ny sasany amin'ireo fiomanana nataonao ho fiatrehana ireo fiovana goavana eo amin'ny fiainana. Inona no tiantraikan'ireo fiovana ireo teo amin'ny fianakavianao? Inona no nianaranao izay afaka hanampy ny hafa izay miatrika ireo fiovana ireo koa?
2. Eritrereto indray ny fahotan'ny i Davida tamin'i Batseba (2 Sam.11). Tena nanimba ny fianakaviany io fahotany io, ary nisy zavatra mahatsiravina maro koa nitranga laity aoriana. Ahoana no anehoan'ny tenin'i Davida tamin'i Solôômôna ny fahasoavan'Andriamanitra niasa teo amin'ny fiainan'i Davida?
Taridalana Fianarana Baiboly I 25